आन्दोलनमा रहेका बिपक्ष दलले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरे – YesKathmandu.com
आन्दोलनमा रहेका बिपक्ष दलले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गरे
मङ्गलबार २९, पुष २०७१
काठमाडौं । संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्न बोलाइएको संविधानसभाको बैठक आन्दोलनमा रहेका प्रतिपक्ष दलहरुले बष्किार गरेका छन् । आन्दोलनमा रहेका एमाओवादीसहित मधेसी दल बैठकमा उपस्थित नहुने भएका छैनन् । उनीहरुले संविधानसधाको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका प्रतिपक्ष दलहरुले संविधानसभाको बैठक बष्किार गरेपनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने बिहान ८ बजे नै संविधानसभामा पुगिसकेका छन् । संविधानका अन्तरबस्तुमा छलफल गर्न कांग्रेस एमालेका नेता बिहानै संविधानसभा पुगेका हुन् ।
विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो कार्यकर्ता राजाराम झाको प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको भन्दै संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्न माग थिए । संविधानसभाको बैठक स्थगित नगरेपछि उनीहरु बानेश्वर पुगेनन् ।
बैठकमा संवैधानिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानमा नमिलेका विषयहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
भट्टराई पनि बैठकमा अनुपस्थित
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. भट्टराई पनि बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । भट्टराईले नै संविधानका विवादित बिषयमा सहभति हुन नसकेका बिषय समेटी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर उक्त बैठकमा भट्टराई नै अनुपस्थित भएका छन् ।
भट्टराईको अनुपस्थितिमा बरिष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन् ।
बल्ल राष्ट्रिय खेल छान्दै सरकार
बाबुरामलाई चुनौति दिदै सूर्यबहादुरले पेश गरे सम्वाद समितिको प्रतिवेदन,अर्काे बैठक १ माघमा
कोइराला क्याम्पबाट रामचन्द्र सभापति, सशांक महामन्त्री
महोत्तरीमा बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाका तस्विर सडकमा जलाइए
गठबन्धन गर्दा पनि हार्ने देखेपछि कांग्रेस माओवादी गुण्डागर्दीमा उत्रिए
भारतसँग किन डराएको ? सत्ताभन्दा राष्ट्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोस्
सङ्घीयतासहितको शिक्षा नियमावली आउँछ